Kuuriyada Waqooyi oo cuna qabatayn cusub lagu soo rogay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Kuuriyada Waqooyi oo cuna qabatayn cusub lagu soo rogay
Kuuriyada Waqooyi oo cuna qabatayn cusub lagu soo rogay
Kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Newyorka ee xarunta QM Golaha ammaanka ee jimciyadda Qurunmaha ka dhexeysa ayaa meel mariyay qaraar ogolaanaya xayiraado lagu soo rogo dalka Kuuriyada Waqooyi kadib markii uu sii kordhay walaaca dunidu ay ka qabtay horumarinta tijaabada Gantaalada ridada dheere.
Go’aankani ayaa Dowladda Kuuriyada Waqooyi wuxuu ka hor istaagaya waxdhoofinta,maalgashi lagu sameeyo dalkaasi, waxayna Goluhu ay ku ansixiyeen qaraarkaasi cod aqalabiyad leh ayadoo aanay jirin cid ka hor timid.
Danjiraha Mareykanka u qaabilsan Jimciyadda Qurumaha ka dhexeysa Nikki Haley ayaa aaminsan in in xayiradani ay tahay tii ugu xooga badnayn oo abid lagu soo rogo wadan.
Xunbaha GOlaha ayaa siweyn u falan qeeyey tijaabooyinkii ugu dambeyeey oo Kuuriyada Waqooyi ay ku sameysay gataalo nuuca Qaaradaha isaga kala gooasha h islamarkaana ku dhawaaqday in ay haatan ay haysato awood ay isagao difaacdo Mareykanka.
Waxaa qarara kaasi Golaha hor keeney Wadamada Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan kuwaasi oo ka walaacsanaa qatarka kaga imaanaysa Xukuumadda Pyongyang.
Safiirka Dowladda Shiinaha u fadhiya QM ayaa go’aanka goluhu uu qaatay ku tilmamay mid muujinaya in dunidu ay ka midaysantahay walaaca laga qabo Kuuriyada Waqooyi, isagoo dhanka kale soo dhaweeyey hadal qoraal ah oo Dowladda Mareykanku ay ku sheegeyso in hadafkeedu uusan ahayn in ay xukunka katuurto regimeka dalkaasi.
Dhinaca kale Danjiraha Ruushaka u fadhiya QM ayaa shirka golaha ku cambaareeyay talaabada dowladda Mareykanak ee Kuuriyada Koonfureed ay ku geeysatay habka difaaca gantaalada isagoo soo jeediyay in la hakiyo howshaasi.
Previous articleMaxkamadda Sare ee Ciidamada Qalabka Sida oo xukuno kala duwan ku riday dad horey dilal u geystay
Next articleGuddoomiyaha Golaha Shacabka JFS oo hambalyo u diray guddoomiyaha cusub ee Aqalka Wakiilada Soomaaliland